Disemba 2021 – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Monthly Archives: Disemba 2021
ZIO na Akwụkwọ Mpịakọta Ime Anwansi Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
“Ime anwansi ga-abụrịrị maka mmadụ!” Akwụkwọ Mpịakọta Ime Anwansi na-enye ohere ọbụna ụmụ mmadụ nkịtị iji anwansi!Gị onwe gị nwekwara ike ịbụ ọkachamara kacha sie ike n'ụwa ma ọ bụrụhaala na ị nwere akwụkwọ mpịakọta anwansi ndị Zio mepụtara! —————————————————————————————-Na agha n'etiti mages na warlocks n'elu wizarding ala 'Aerok'…'Nwa nna’ nwee ihe ịga nke ọma n'imechichi warlock kasị ike. Otú ọ dị, ọ tụfuru ọtụtụ n'ime ya… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Ime anwansi, Scrolls, ZIO
Poppy Punch bụ egwuregwu ọgụ Poppy! Jiri aka gbagọrọ agbagọ kụpụ onye ọ bụla na mgbanaka ahụ. Naanị otu nwere ike ịbụ onye mmeri! Gị na ndị ọzọ na-asọ mpi bụ Poppy. Ndị agha niile ga-ezute ihu na ihu na mgbanaka ahụ, na onye ọ bụla ga-alụ ọgụ maka onwe ya! Ọrụ gị bụ ịchụpụ ndị mmegide niile… GỤKWUO »
Mma agha nna ukwu: Ragdoll ọgụ 3D aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ị dịla njikere maka ọgụ na-atọ ụtọ na Sword Master: Ragdoll ọgụ 3D? Ọ bụ oge ịbụ onye ragdoll nke mma agha n'onwe gị! Egwuregwu egwuregwu dị nnọọ mfe. Jikwaa asatọ wee jiri mma agha fepụ ndị iro niile. Chọta igodo wee pụọ na maze. Mma agha gị nwere ike ịgbawa gbọmgbọm TNT, agbaji brik,… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Ọgụ, Nna-ukwu, Ragdoll, Mma agha
Ị dịla njikere ịghọ onye nwere ọgụgụ isi n'ịchọta ndịiche? Budata egwuregwu mgbaghoju anya ọhụrụ anyị 'I Spotted It' ma gbalịa ịchọta ọdịiche dị na foto a. Ụlọ mara mma na ọmarịcha ala., ihe na-adọrọ mmasị, Ụgbọ ala ndị dị oke ọnụ na ụmụ anụmanụ mara mma na-echere gị na egwuregwu a! Nke a bụ egwuregwu kachasị mma iji zụọ echiche ezi uche gị… GỤKWUO »
Poppy Zoo 'N chọọ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Poppy Zoo 'N chọọ oge egwuregwu, ezigbo ochie kpochapụwo zoo ma chọọ egwuregwu nwere ntakịrị egwu egwu. Gbaa ọsọ zoo na Huggy Wuggy ma ọ bụ bụrụ Huggy n'onwe ya iji jide ndị egwuregwu ndị ọzọ. Chọta ma ọ bụ chọta, ọ dịzịrị gị! Dị ka onye na-ezo, ị ga-adị ngwa ngwa ịgbanarị aka Huggy ka ị na-enyere aka… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, hide, Poppy, seek
Egwuregwu Pop Pop – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Jiri bọọlụ Pop Pop nwee anụrị na oge nkịtị gị ! Ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu a, biko kesaa ya na ndị enyi gị ma nwee anụrị ọnụ! Iwu dị mfe:1、Jikọta bọọlụ nwere otu nọmba2、Nweta bọọlụ nọmba dị elu ka ị na-ejikọta abụọ3、Gaa na njirimara Njikọ bọọlụ ọhụrụ:1、Nhazi mara mma & mmetụta egwuregwu magburu onwe ya2、Ọ dị mfe ịmụta… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Balls, CheatsHack, POP
Ụjọ Poppy: Isi nke Mbụ – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Ị nwere ike dozie mgbagwoju anya niile wee mee ka ọ dị ndụ ụlọ mmepụta ihe a gbahapụrụ agbahapụ? Ihe egwuregwu ụmụaka na-abọ ọbọ aha ya bụ Huggy na-echere gị n'ime oke a. Jiri aka Blue na Red Hand gị dị ike iji mebie sekit eletriki ma ọ bụ jide ihe ọ bụla site n'ebe dị anya. Chọgharịa ihe omimi ahụ… ma ghara ijide ya! N'ime egwuregwu ahụ, ị… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Isi, CheatsHack, Horror, Poppy
Egwuregwu ịgbatị Huggy – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Nabata n'ime egwuregwu mgbagwoju anya gbatịa ọhụrụ. Ka anyị kpọọ egwuregwu Huggy Stretch ma chekwaa Huggy site na ịmecha ọkwa egwuregwu egwuregwu mgbagwoju anya na-atọ ụtọ.. ❄️ Otu esi egwu egwuregwu ịgbatị:• Pịa ma gbatịa ụkwụ ma ọ bụ ogwe aka iji ruo ebe a na-aga • Iwu abụghị ịgbatị nke ukwuu, ma kpachara anya ka ọ ghara… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, egwuregwu, Huggy, Stretch
Iwe agha Dragọn – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Dragọn ahụ mkpu na-ama jijiji eluigwe na ụwa,na nka dị ike na ọmarịcha. Site n'ebe dị anya, dragon nke nwere isi anọ nēguzo n'etiti elu-igwe na uwa: isi anọ ya nāchikọta ike nke ihe di iche iche, gụnyere ire ọkụ, égbè eluigwe, kefriza na àmụmà. Dragọn anwansi na-achọghị imefusịa ike elementrị ya dị ike, na ụmụ mmadụ ọjọọ na-awakpo dragọn… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Battle, CheatsHack, DRAGON, Fury
Akụkọ ifo 2 – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Amụma dị egwu bịara n'ọnụ - ọdachi na-abịa. Amoosu na-enupụ isi na-achọ ịzọpụta ụwa ma ọ bụ mebie ya… “Akụkọ akụkọ ifo: Cataclysm" bụ egwuregwu egwuregwu n'ụdị nke ihe zoro ezo, nwere ọtụtụ obere egwuregwu na egwuregwu mgbagwoju anya, agwa agaghị echefu echefu na ajụjụ mgbagwoju anya. Ọhù we bia n'ọnu-ọnu-uzọ. A… GỤKWUO »
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Akụkọ ifo, Tales